46 iskuul oo ku yaalla Birmingham ayaa lagu sheegay in eey ka dhaceen gaboodfallo iyo handadaad dhinaca galmada ah: – Voice of Somalis In Exile
Talaado (15/06/2021-Birmingham (AminaWehelie.Me)- Arday iminka dhigata iyo kuwo horey u dhigan jiray oo qoraal ku gudbiyey marqaatifurkooda ku aadan, in iskuuladooda dhexdooda lagula kacay handaadaad iyo gaboodfallo, dhinaca galmada ah, ayaa la soo bandhigay.
Arrintaan ayaa lagu baraarugay ka dib markii ay soo baxday natiijada daraasad la sameeyey oo tibaaxday, in mid ka mid ah todobadii gabdhood oo iskuulada ka dhigta gobollada England iyo Wales oo dalkan UK lagula kaco gaboodfal dhinaca galmada ah, ka hor inta aaneey gaarin da’da 16 jirka.
Heyadda qiimeynta tayada waxbarashada ee OFSTED ayaa ka digtay, in marka dambe caadi loo arki doono haddii tirada gabdhaha iskuuleyda ah ee lagu xadgudbay ay sii korodho.
Arrintaan oo ardaydu ku gudbiyeen, website loo ogoladay in ay si qarsoodi ah wax ugu qori karaan, iyagoo aan waxba xusin, cidda ay yihiin si aan loo aqoonsan, ayaa yaab iyo amakaag u keentay qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee Birmingham ku matala aqalka xildhibaanada ee UK.
Jose Philips oo ka mid ah xildhibaanadaas, ayaa sheegtay in gabdhahaas yar-yar la dayacay, aynta arrintaasi tahay mid dhakafaar weyn abuureysa.
Warbixinta ayaa sheegtay in caruurtani aneey u arkin xal in eey sheegaan dhibka ku dhacay, sababtuna ay tahay in ay xilliyo isku dhow-dhow dhacaan oo aneey waxba isu jirin, farabadnaantooda darteedna ay niyad jabaan in eey dacwoodaan ama ay cid kale u sheegaan dhibka gaaray.
Waxaa baarayaasha arrintan ku lug lihi sheegeen, in ardayda wiilasha ahi ay ku faafiyaan baraha bulshada, ama kooxo iyaga dhexdooda ah oo uga sameysan whatsup iyo snapchat, sawiro qaa-qaawan oo ay ka qaadeen gabdhaha, halka ay gabdhaha ardayda ah ee dhibku soo gaaray ay sheegeen, in xitaa meel kaleba daaye lagu taa-taabto iyagoon raali ka ahayn, goobaha furan ee iskuulada dhexdooda ah.
Heyadda qalad-ogaashaha ee Watchdog, oo booqatay 32 iskuul oo isugu jira, kuwa dowladda iyo kuwo gaar loo leeyahayba, lana hadlay Ilaa iyo sagaal boqol oo arday oo gabdho ah ayaa xaqiijisay in ey dhab tahay arrintan.
Dowlada UK ayaa iyadu bishii April ee sanadkaan amar ku bixisay, in dib u eegid lagu sameeyo, sharuucda iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee dalka ee ku aadan, ilaalinta bed-qabka caruurta iyo da’yarta.
UK ayaa waxaa soo badanaya gaboodfallada dhinaca jinsiga salka ku haya oo lagula kaco, haweenka qaasatay xilliyada habeenkii ah amaba gaadiidka dadweynaha dhexdooda, halka dacadaha qaarna la geeyey maxkamadaha, lana xukumay.